Izindaba - Yisiphi kulezi zibazi zasemadolobheni ezingama-20 esakha ubuciko?
Yisiphi kulezi zibazi zasemadolobheni ezingama-20 ezinobuciko obuningi?
Idolobha ngalinye linobuciko balo obusobala, nezithombe zasemadolobheni ezakhiweni eziminyene, otshanini obungenalutho nasemapaki emigwaqo, kunikeza indawo yezindawo zasemadolobheni isisindo nokulinganisela kokuminyana. Uyakwazi lokho lezi Izithombe eziqoshiwe zedolobha ezingama-20 zingasiza uma uziqoqa ngokuzayo.
I- izithombe ezibaziwe ye " Amandla Emvelo ”Ku amadolobha amakhulu emhlabeni wonke aklanywa ngomculi wase-Italy uLorenzo Quinn. UQuinn waphefumulelwa ukubhujiswa kwemvelo yomhlaba ngemuva kwesiphepho, futhi wenza ithusi, insimbi engagqwali ne-aluminium izithombe ezibaziwe ku- " Amandla Emvelo " uchungechunge . Lona yi "Power of Nature" eLondon.
Umculi waseFrance uBruno Catalano udale amaLes Voyageurs (Les Voyageurs) eMarseilles, eFrance. Isifanekiso sifihla izingxenye ezibalulekile zomzimba womuntu, futhi kuzwakala sengathi basanda kudlula emhubheni wesikhathi, futhi ingxenye elahlekile imane ivuse abantu Khumbula ukuthi wonke umuntu ohambahamba nakanjani ushiya igumbi elikhulu lokucabanga lapho eshiya ikhaya lakhe. Futhi ingabe ingxenye elahlekile yesithombe ebaziwe ibonisa inhliziyo enganakiwe yabantu besimanje?
Isifanekiso sikaKafka esakhiwe ngumqophi waseCzech uJaroslav Róna sisuselwa endaweni yenoveli yokuqala kaKafka ethi “America” (1927). Embuthanweni, umuntu ozongenela ukhetho kwezepolitiki ugibela emahlombe esigebenga. Ngo-2003 ukubaza kwaqedwa eDusny Street ePrague.
Iningi lemisebenzi kaLouise Bourgeois (1911-2010) iletha umona, intukuthelo, ukwesaba kanye nobuntwana bakhe obubuhlungu emehlweni omphakathi ngemisebenzi. "Maman" (Isicabucabu) phambi kweGuggenheim Museum eBilbao, eSpain. Lesi sigcawu esingamamitha angama-30 ubude sifanekisela umama wakhe. Ukholelwa ukuthi umama wakhe uhlakaniphile, unesineke futhi uhlanzekile njengesicabucabu.
I-Cloud Gate edizayinelwe ngumdwebi waseBrithani u-Anish Kapoor ingumfanekiso oqoshiwe wama-oval ayi-110, owaziwa nangokuthi i-pod, oseMillennium Park yaseChicago. Kukhuthazwe yi-mercury ewuketshezi, lesi sithombe sinamamitha angu-66 ubude namamitha angu-33 ukuphakama. Kungumfanekiso odumile wasemadolobheni eChicago.
Ngo-2005, osebeni olusempumalanga yeDanube eBudapest, umqondisi wamafilimu uCan Togay nomdwebi wemifanekiso uGyula Pauer bakha i- “Shoes by the Danube” ukukhumbula ukubulawa kwamakhulu amaJuda aseHungary kusukela ngo-1944 kuya ku-1945. Ngaphambi kokubulawa kwabantu, amaJuda abeka izicathulo zawo osebeni lomfula, kepha ngemuva kwesibhamu, isidumbu satshalwa ngqo eDanube.
Isithombe sikaNelson Mandela saziwa kahle. Lesi sithombe esiseduze kwaseHowick eNingizimu Afrika senziwe ngumculi wakuleli uMarco Cianfanelli.
Isifanekiso se-clothespin esakhiwe ngumqophi waseSweden uKlas Oldenburg siseduze neHholo Lomuzi LasePhiladelphia.
IDigital Dougca ”(iDoug Digital) iyinhle noma iyinqaba, konke kuseVancouver ebheke itheku nezintaba zaseCypress Park. Lesi sithombe sakhiwe ngensimbi yensimbi, ukugqokiswa kwe-aluminium namacube amnyama namhlophe, okwenza kube yindawo ekahle yokuthi izivakashi nabantu bendawo bathathe izithombe.
Imbali yebhaluni (ebomvu) isethwe eWorld Trade Center entsha eNew York City.
Ukuqoshwa kwethusi kwamahhashi asendle eLas Vegas, okwenziwe nguRobert Glenn, kukhombisa ukuvela kwamahhashi asendle ayisishiyagalolunye agijima emanzini.
Isifanekiso esiphambi koMtapo Wezincwadi Kazwelonke eMelbourne, e-Australia, sisho ukuwa kwempucuko futhi ngasikhathi sinye sisho ubufushane beqiniso.
"I-Knotted Gun" itholakala eduze kweNdlunkulu yeZizwe Ezihlangene eNew York. Lesi sithombe sibonisa ithemba lomhlaba ongenalo udlame.
Lokhu kufakwa kwekhanda lensimbi kutholakala ePrague futhi ngomunye wemisebenzi kaDavid Sini. Umehluko phakathi kwalesi sithombe ukuthi ingazungezisa zonke izingqimba zensimbi engagqwali ama-degree angama-360 nge-Intanethi, futhi uma iqondaniswe ngezikhathi ezithile, kungakhiwa ikhanda elikhulu. Umsebenzi ukuhlanganiswa komculi wokulawulwa kwemishini nobuchwepheshe bekhompyutha nobuciko.
Hlobo luni lokucabanga lolu sithombe esingamamitha angamashumi amabili ubude ePhiladelphia siveza umculi? Susa zonke izithiyo, kumele…
Lesi sithombe sitholakala ngaphandle kweCentre Pompidou Museum of Modern Art. Yakhelwe ngumdwebi waseFrance uCesar Baldaccini, ihlanganisa enye yezingqikithi azithandayo, ukumelwa okuyiphupho kwabantu, izilwane nezinambuzane.
Yakhelwe ngumculi waseHungary u-Ervin Loránth Hervé, utshani obukhulu buyaphakanyiswa futhi izithombe ezinkulu zibonakala zikhuphuka zisuka phansi. Lesi sithombe sibekwe ngaphandle kweMakethe Yezobuciko yaseBudapest.
Iphupho lika-Alberta libaziwe ngumdwebi waseSpain uJaume Plensa. Umsebenzi unezombusazwe kakhulu, futhi abantu abaningi babonakala benemibono eyehlukene ngencazelo yawo yangempela. Kodwa-ke, yilokhu okwenza ubuciko bukaPlensa bukhetheke, ngoba kukhuthaza ukuxhumana okwakungekho ngaphambili.
Umsebenzi womqophi waseSingapore uChong Fah Cheong (igama lesiShayina: Zhang Huachang). Lesi sithombe sibonisa isikhathi lapho iqembu labafana ligxumela eMfuleni iSingapore. Leli qembu lezithombe ezibunjiwe liseCavenagh Bridge, budebuduze neFullerton Hotel.
"I-Spoon nama-Cherry" eMinneapolis Sculpture Garden umklamo omuhle futhi odlalayo engadini, futhi ubuye ubonakale ngobuhlakani emaphethelweni womabili weziqu zama-cherry amnyama. Umqophi wawunika umsebenzi wokufafaza amanzi ukugcina i-cherry isebenza njalo.